Soo dejisan SoundHound 8.8.1 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: SoundHound
SoundHound – waa qalab sahlan oo lagu ogaado oo loo aqoonsado muusikada. Software wuxuu kuu ogolaanayaa inaad diiwaangeliso marxalad ka kooban hal-abuurka isla markaana muujiso magaca heesta, qoraaga iyo albaabka. SoundHound waxay awood u leedahay helitaanka cajalad muuqaal ah oo ku saabsan jilitaanka YouTube ama qoraalka heesaha, taariikhda sii deynta ee albumka ama heesaha, heesooyinka la midka ah, iwm. SoundHound waxay kuu ogolaaneysaa inaad la wadaagto jaangooyooyinka la jecel yahay email, Facebook ama Twitter. Sidoo kale, haddii ay jirto maqnaanshaha xiriirka internetka, software wuxuu kuu ogolaanayaa inaad keydiso soo bixitaanka soo baxa oo dibna u aqoonsado.
Qorista iyo aqoonsiga muusigga
Waxay muujisaa macluumaadka faahfaahsan ee ku saabsan wadada
Awoodda la wadaagayo jidka la jecel yahay ee lala yeesho asxaabta
Soo dejisan SoundHound
Faallo ku saabsan SoundHound
SoundHound Xirfadaha la xiriira
Codsiga rasmiga ah ee shabakadda bulsho caan ah si ay u daabacaan iyo blogs ku arkaan. Sidoo kale software ka taageertaa loo maqli karo iyo is-dhaafsiga ee files kala duwan ee warbaahinta iyo diiwaanka qoraalka.